I-Condo Studio Condo kufuphi neCurve kunye ne-IKEA Damansara - I-Airbnb
I-Condo Studio Condo kufuphi neCurve kunye ne-IKEA Damansara
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguHerlyn
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uHerlyn iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ukuzola kodwa kukhululekile ngokukhangayo zezona mpawu zichaza ngcono iyunithi, ebekwe entliziyweni yeDamansara Perdana kwaye ikumgama wokuhamba kuzo zonke izinto eziphambili kunye nezinto ezinomtsalane.
Iyunithi yesitudiyo eZiquleleyo ibonelela ngombono omangalisayo we-pool kunye nenkangeleko yayo kwaye ifanelekile kubahambi abanqwenela uxolo kunye nobumfihlo njengoko baya kuba nayo yonke iyunithi kubo.
Ibekwe kumgama omfutshane ukusuka kwisixeko saseKuala Lumpur, ilokishi ikwaqhagamshelene kakuhle ngololiwe.
Iyunithi ye-studio ene-self-ziqulathe ngokupheleleyo, emalunga ne-420 sqft ngobukhulu ineplani yomgangatho ovulekileyo oquka igumbi lokuhlala cum kunye nendawo yokutyela edibeneyo kunye nekhitshi.
Iyunithi yesitudiyo inobutofotofo bezidalwa ezininzi eziya kuqinisekisa ukuba ukuhlala kwakho akukho nto imfutshane kumtsalane. Uyakonwabela iimbono ezizolileyo zephuli kunye nembonakalo yomhlaba ejikelezileyo ngebalcony, ilungele ukuphumla emva kosuku olude.
Iyunithi iza neendawo eziphezulu zokuzonwabisa ezidityaniswe noqhagamshelo lwe-Intanethi olukhawulezayo noluzinzileyo oluya kukushiya ngokungathandabuzekiyo ungafuni ukuphuma ekhaya.
• 100Mbps IXESHA IFayibha ye-Intanethi
• NETFLIX iAkhawunti yoMsebenzisi
• LG 32-intshi LCD Tv
• Isitovu seGesi eMabini
Kukwakho nebhegi yebhontshisi epholileyo onokuthi uphumle kwaye uziphose-ubukele imiboniso oyithandayo yeNetflix.
Iindwendwe ezifuna igrosari zinokuthi ziodole ngokuhambisa izicelo ezifana neLazada okanye iTesco okanye undwendwele iJaya Grocer, iBens Grocer okanye iTesco Extra yonke phakathi kwemizuzu emi-5 yomgama wophuhliso. Kukho isitovu segesi esiphindwe kabini sokupheka ngeentsuku oziva ngathi ufuna ukuzenzela ukutya okuphekwe ekhaya.
4.86 · Izimvo eziyi-118
Ibekwe malunga nemizuzu eyi-18 kude nesiphithiphithi saseKuala Lumpur, ilokishi yaseDamansara Perdana ePetaling Jaya, eSelangor, yindawo ehlala abantu abatyebileyo apho abantu abavela kuzo zonke imvelaphi baxubana kwaye baxube kwaye bayibize ekhaya.
I-Damansara Perdana ibekwe ngaphakathi kweGolden Triangle yePetaling Jaya, equka iBandar Utama kunye neMutiara Damansara. Lo mmandla ubusoloko uvotelwa nguMda njengeyona dilesi ifunwayo eKlang Valley. Yiba lishishini, ukulungeleka, ukuphumla okanye indawo yokuhlala, le ndawo igcwele ubomi ngokufikeleleka okuchukumisayo ngeDamansara-Puchong Expressway, SPRINT Highway (Penchala Link), Persiaran Surian, kunye ne-NKVE.
Ubumelwane buthembisa ukuhlala simahla apho abahlali baphangwa ukuze bakhethe xa kufikwa kwizinto eziluncedo zalapha kunye nokutya kunye neziselo. Ukwenza isivumelwano simnandi nangakumbi, iivenkile ezinkulu ezinje ngeEmpire City Mall, iCurve, IKEA, 1Utama kunye neStarling Mall zonke zingaphantsi kwe-5km kude.
Nakumgama wokuhamba weyunithi yakho, uya kufumana intaphane yeendawo zokutyela, iikhefi kunye 'namamamak' eyona ndawo ityiwayo yaseMalaysia ebonelela ngokutya okumnandi kunye neziselo nangayiphi na iyure yemini.
Umbuki zindwendwe ngu- Herlyn
Ndihlala ndifumaneka ngemibuzo ngefowuni, umbhalo okanye i-imeyile kwaye ndingathanda ukudibana kunye nokunxibelelana neendwendwe, ukuba ixesha liyavuma.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, amathandabuzo okanye ufuna iingcebiso okanye ulwazi lwasekhaya kwindawo ezingqongileyo, umququzeleli wam ofudumeleyo nonobubele uhlala kufutshane kwaye angathanda ukukunceda ngombuzo wakho.
Ukuba unayo nay…
Iilwimi: English, Melayu, Tagalog